IHtc Tattoo kubunzulu | I-Androidsis
antocara | | Izaziso, Reviews
Enkosi kwivenkile yefowuni IVIPMOVIL Ngobubele abasiboleke isiphelo sendlela IHtc Umvambo Sinokukunika ngokwakho uluvo lokuqala lwesiphelo esivelise kuthi.
Ukuqala, andizange ndikholelwe ukuba le fowuni ilungile Ifowuni ye-android, ikakhulu ngenxa yenyani yokuba Isikrini sokuxhathisa. Ndinesiphelo seminyaka ethile nge Izikrini ezichasayo, eyokugqibela yayiyi-Samsung Omnia, kwaye andikholwa ukuba ngolu hlobo lwezikrini unokusebenzisa Inkqubo ye-Android ngokutyibilikayo njengamava. Ewe inkqubela phambili sele yenziwe ngolu hlobo lwesikrini kwaye ukuba zonke zifana nezo zesiphelo, abananto ingako yokumonela capacitive.
El IHtc Umvambo Ngokukhawuleza xa uyikhupha epakethweni kwaye uyithatha, unoluvo lokuba awunanto esandleni sakho, ilula kakhulu kwaye incinci, kwaye ndiyifumene ngakumbi ukuba kunokwenzeka, isetyenziselwa IHtc G1. Ukuchukumisa kwayo kugudile kwaye amaqhosha aphendula kakuhle ngaphandle kokucinezela kakhulu. Isikrini sisibonisa imibala echazwe kakuhle kunye nobukhulu bayo, nangona incinci kuneetheminali ze-Android ezithengisiweyo ukuza kuthi ga ngoku, zifezekisa umsebenzi wazo. Iimenyu zibukeka zilungile, kwaye ukufikelela kuzo kugudile.
Zonke Inkqubo ye-Android ibaleka ngokukhawuleza nazo zonke izikrini ezigcwele iwijethi. Ukulibaziseka kokudlula kwizikrini phantse akukho nto kwaye ukhetho, usetyenziso kunye nokufikelela kwimenyu esezantsi kukhawuleza. Kuyaphawuleka ukuba i-Htc iphucule IHtc Sense malunga neyokuqala ephume neHtc Hero.
Makhe siye ngaphaya kwawo onke amanqaku e IHtc Umvambo.
1 ISIKHUMBUZO NOKUDLULA NGOKUPHELELEYO
4 UKUQWALASELWA KWOKUGQIBELA
Njengoko sele sitshilo kwiscreen se IHtc Umvambo incinci kunezikrini zezinye Iitheminali ze-Android Iphehlelelwe ukuza kuthi ga ngoku, ngakumbi la manyathelo 2,8 intshi ngesisombululo se-QVGA ezingama-240 × 320. Nangona incinci, inkqubo Android Iye yahlengahlengiswa kobu bukhulu besikrini ukuze umbono wakho ufane nasiphi na esinye isixhobo. Iimenyu, iisemenus, kunye nezinye iindlela zokwehla zilinganiswe ngokuchanekileyo kwaye ziyafundeka kakuhle kunye nombono. Ayichaphazeli ubungakanani bescreen esincinci xa Ukusetyenziswa ngokuchanekileyo kwe-Android. Ngokucacileyo ijongeka incinci kodwa ilungile.
El Uhlobo lwesikrini luyaphikisana kodwa ukusebenza kwayo kokubini ngokuthe tyaba nangokuma nkqo ngokukrola kunye nokukhetha ukhetho ngokucinezela kuyamangalisa ngokulula kwaye kulula. Uxinzelelo ekufuneka lusetyenziselwe ukufumana impendulo yesixhobo luncinci kakhulu kwaye phantse ludlule kwiscreen esisebenzayo. Ukuba ufuna ukwazi ifayile ye- Umahluko phakathi kwezikrini ezinamandla kunye nezichasayo apha unayo iposti apho kuninzi malunga noku kujongwa.
El IHtc Umvambo Iza ixhotywe ngekhamera ye-3,2 mpx, ukusuka kwindawo yam yokujonga eyoneleyo kwiimfuno zokusebenzisa ikhamera kwifowuni ephathekayo. Imifanekiso eqingqiweyo ikumgangatho owamkelekileyo.
Iifomathi zomsindo ezihambelana nefowuni yiMP3, AAC, AMR-NB, WAV, MIDI kunye neWindows Media Audio 9, njengoko ubona ezona ziqhelekileyo sinokuthi sizifumane.
Kwicandelo levidiyo singasebenzisa i-MPEG-4, H.263, H.264 kunye neefayile zeWindows Media Video 9.
Esi sixhobo sinesamkeli esidityanisiweyo soonomathotholo, endisithathela ingqalelo njengempumelelo kuba nangona olu hlobo lweetheminali kuyinto eqhelekileyo ukuba nenqanaba ledatha elihambelanayo, ukufumana unomathotholo ngokusebenzisa itonela kuphucula umgangatho kunye neendawo esinokuthi sizisebenzise .
Njengabantakwabo Android indala, ine-accelerometer kunye nekhampasi.
El IHtc Umvambo Yisiphelo sendlela yokufumana yonke intsebenzo phantse inyanzelekile ukuba inqanaba ledatha elinxulunyaniswe nayo ukuba lihlale linxibelelana neenethiwekhi zethu esizithandayo kunye neeakhawunti zethu ze-imeyile. Ngenxa yoku, kubalulekile ukuba unxibelelwano olukhawulezileyo naphina apho sikhona, apho lunohlobo loqhagamshelo lweHSDPA kunye nesantya sokulayisha ukuya kuthi ga kwi-384 Kb / s kunye nokukhuphela isantya ukuya kuthi ga kwi-7,2 Mb / s. Ukongeza kokunokwenzeka kolu nxibelelwano lukhulu, kuye kuthiwe uqhagamshelo oluqhelekileyo lwe-GSM / GPRS / EGDE.
Namhlanje phantse zonke iifowuni zixhotyiswe ngonxibelelwano ngokungathi ziilaptops kunye nefayile ye- IHtc Umvambo ayikho ngaphantsi kunabanye. Inodibaniso lweWifi IeEE802.11 b / g, iBluetooth 2.0 ene-EDR kunye ne-A2DP ukuze ikwazi ukusebenzisa ii-headphone ezingenazingcingo zestereo.
Ukuze singalahleki kwiihambo zethu, sinesamkeli seGPS esidibanisa nesoftware esiziswa ngokusisigxina iya kusivumela ukuba singalahleki kuhambo lwethu.
I-jack ye-3,5 mm yeaudiyo icwangciswe phezulu kwaye ngayo sinokudibanisa ii-headphone zethu esizithandayo ngaphandle kwengxaki.
Ngokusebenzisa i-pin-2.0 ye-USB 11 min port siya kuba nethuba lokudibanisa IHtc Umvambo kwikhompyuter ukuze ikwazi ukungqamanisa ne-Outlook.
Ngoku masambe nzulu kwi IHtc Umvambo. Nangona sisixhobo esitshiphu kunezinye Iitheminali ze-AndroidHayi ngenxa yesi sizathu, amandla ayo kunye nezinto ezikumgangatho ophezulu.
Iprosesa IQualcomm MSM7225 kwi-528 Mhz Isantya siyithetha yonke. Isantya esifanayo nezinye iitheminali kwintengiso. Icandelo lememori linikwa nge-512 MB yeROM kunye ne-256 MB ye-RAM, ine-RAM engaphezulu kune-Htc Magic.
Ibhetri ye-lithium ion eyi-1100 mAh isinika ukuba sikwazi ukuba nemizuzu engama-390 edityanisiwe kwincoko ngokusebenzisa inethiwekhi ye-GSM ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-340 ngelixa uphumle uqhagamshele kuhlobo olunye lwenethiwekhi.
Ubukhulu bayo buyi-106 × 55,2 × 14 mm kwaye inobunzima be-113 gram kunye nebhetri endaweni. Njengoko benditshilo, isibane esikhanyayo kakhulu.
Imemori ekhoyo kwisiphelo sokugcina inokwandiswa ngokusebenzisa ikhadi le-SD elincinci elihambelana ne-SD 2.0.
Nje ukuba zonke iimpawu zesiphelo ziqwalaselwe, izigqibo ziyanelisa kakhulu. Inkqubo ye- IHtc Umvambo Sisiphelo sendlela ngokubhekisele kwizixhobo zokusebenza ezinesakhono esikhulu ngaphandle kokukhweletela nayiphi na ifowuni yangoku. Ngokubhekisele kwisoftware, yithi ifakiwe Inguqulelo ye-Android 1.6 eyaziwa ngokuba yiDonut. Isimo esibonakalayo seHtc, IHtc Sense, yenza usebenziso lwayo yonke imisebenzi yenkqubo lula, ngokulula nangaphezulu.
Olunye lweempawu ezenza ukuba esi siginali sahluke kwezinye kukuba sinethuba lokuzikhethela kokubini kwisoftware, ngokwazi ukulungiselela ezahlukeneyo Htc Sense iwijethi Ngokuthanda kwethu, njengaphesheya ngokuba nako ukuyila izindlu zethu zoyilo lwethu.
Kwiphepha TattooMyHTC.com Singayila okanye sikhethe enye yoyilo esele ikho kwaye ngexabiso le- € 12 uneselfowni eyenzelwe wena ngokupheleleyo.
Ngamafutshane, iselfowuni ekhuthazwayo kakhulu kwixabiso / ukusebenza komlinganiso esiwunikwayo. IHtc Umvambo.
Ungayifumana kwivenkile ekwi-intanethi exhasa olu hlaziyo, IVIPMOVIL, ngexabiso le- € 335, kubandakanya iVAT kunye neendleko zokuhambisa, ezisiwe emnyango wakho simahla, ngaphandle kwamaqhina neenkampani zeefowuni kunye nokukhetha iirhafu esizifunayo kwinkampani esiyifunayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Reviews » IHTC TATTOO EMVA
Izimvo ezi-114, shiya ezakho
Ndicinga ukuba uyilibele eyona nto ibaluleke kakhulu: phawula ukuba zonke izinto ezenziwayo kwintengiso zifanelekile, kuba zinesisombululo esincinci.
Ukusetyenziswa komgaqo ekugqibeleni kufuneka konke kuhambelane. Kude kuphume i-Android 1.6, inkqubo eneTattoo efakiweyo, ubungakanani bekhusi ibiyenye. Nge-Android 1.6 sdk, abaphuhlisi bezicelo banokulungelelanisa usetyenziso lwabo kwiindidi ezahlukeneyo zescreen abaza kuzibona kwintengiso. Phantse wonke umntu onesicelo kwimarike, ndicinga ukuba baya kuzilungisa ukuze bafezekise ukuhambelana okuphezulu nenani elikhulu leefowuni. Ukusukela namhlanje kungakhona ezinye izicelo ezingahambelaniyo, kodwa ngokuqinisekileyo ziya kuba ngaphezulu kwexesha.
Okokuqala, ukuvuyisana novavanyo oluhle. Ngaphandle kwamathandabuzo, ucacisile onke amathandabuzo okuba ingaba le fowuni ingaba yenye yezokundibamba. Ndandinomlingo, kodwa umba wexabiso lesiphelo kunye nenqanaba ledatha elinyanzelekileyo landigcina ndibuyele umva. emva koko ndabona itattoo kwaye andikhathali ngayo ngenxa ye «» iscreen esincinci »» esinaso nangenxa yesikrini esichasayo. Kodwa ndizibonile iividiyo ezininzi kunye nokuphononongwa okunje, ukuba isikrini "sinamandla", kuba bendinazo ezinye iiterminal ezinje nge-5800 kwaye kufuneka ndityhale iscreen, akupholanga, haha. Ke enkosi kuwe yile fowuni ilandelayo oza kuyithatha, ngaphandle kokuba undinike itrinket yomlingo.
Ngokuphathelele kwizimvo zeparsimonias, ukuba ingangumba obalulekileyo ukujongana nawo kuba ndikhe ndabona amagqabantshintshi apho umcimbi wezicelo ezingahambelaniyo ukhankanyiwe kuba ezinye iiterminal zii-intshi ezi-3,2.
Ukubulisa kunye nombulelo
Enkosi ngezimvo. Ngomso okanye ngosuku emva kokuba ndithumele ividiyo ndisebenzisa i-terminal, andinalo ixesha lokuyihlela, kwaye ndiyakuqinisekisa ukuba umahluko kunye ne-capacitive ucace gca. Njengoko benditshilo eposini, ndisebenzise iifestile zeselfowuni ngezikhuselo ezichasayo kangangexesha elithile, kodwa ayinanto yakwenza nolu hlobo. Izicelo endiziphendulileyo ngaphambili. Umbuliso
UJuan de sitsho
Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba iiTattoos ezi-orenji zifakiwe?
Ngokutshintsha iRom bangakhululwa? (Ndixakeke koku).
Kungenxa yokuba apho ndihlala khona bayinikela kwi-159 ehlawulwe kwangaphambili (ngaphandle komdibaniso wenqanaba ledatha okanye iifowuni okanye nantoni na kwaphela)
Andazi ukuba iyakuba yimpazamo okanye yintoni, kodwa kubonakala kunzima kakhulu, enye into kukuba beza kubanjiswa kwaye ngenxa yoko ixabiso labo.
Phendula uJuan de
Uthetha ukuthini ngekapa? Ukukhulula ukuze ukwazi ukuyisebenzisa nomnye umsebenzisi akunanto yakwenza nokutshintsha i-rom
Ndithetha ukuba ngexabiso (ndicinga ukuba kukho ikati evaliweyo)
Andazi ukuba imakethi ayizukufikelela kamva okanye ukuba ezinye izicelo azizukukwazi ukufakelwa njenge-gmail okanye into enjalo.
Bendithetha ngeRom, ukuba kuyinyani ukuba le caps, endingayaziyo, xa utshintsha iRom ungatsiba le cap kwaye uyikhulule, kodwa njengoko usitsho ayinanto yakwenza nayo.
Intengiso ukuba uza kukwazi ukufikelela kuyo, kodwa ukufikelela kuyo ufuna inqanaba ledatha okanye iWi-Fi. Ukuyivula akunamdla kwiirom. Jonga ngononophelo ukuba ayinayo inkcitho encinci ngenyanga kwanokuba ihlawulwe kwangaphambili.
Ngaba yiyo yonke indawo endikhe ndayibona ukuba yenziwe ziinkampani kunye nabantu abaziqeshileyo, ndothuswa kukubona ukuba lihlawulelwa elo xabiso.
Ngelo xabiso kunye nokuhlawulwa kwangaphambili, iorenji ihlala inikezela ngeetheminali ezisisiseko, ukufowunela nokunye okuncinci.
Ekuphela kwento endicinga ukuba yimpazamo kwaye bayibambe ngaphambi kokuba bayazi okanye bayifumene.
Ndithetha nentombazana eyayiphethe ukusekwa kwaye yandixelela ukuba loo mini ifikile kodwa ayazi ubuchule be-terminal okanye i-android. Uye wandixelela nokuba ngeentsuku ezimbalwa bazobhatala iHero.
Bendingazi malunga nokuhlawulwa kwangaphambili kunye nenkcitho encinci, bendingazi ukuba kukho olo khetho, ndibuze intombazana eliqela ukuba loluphi uhlobo lokuhlawulwa kwangaphambili, kwaye ibisoloko indixelela ngokuqinisekileyo ukuba yinto ehlawulwa kuqala,
Ukuba bendinekati encinci ehlawulwe kwangaphambili, ngokungayiphindi ndiyenze ngokutsha kwaye ndiyikhulule, yonke into ibiya kulungiswa.
Ndikhe ndacinga ngokufumana iselfowuni engaphezulu ngeesenti ezi-3 ngemega nganye okanye nge-simyo ngenqanaba lemihla ngemihla.
Ndinethuba lokuzisa iselfowuni yasimahla evela e-USA (ndicinga ukuba iza kubiza ixabiso eliphantsi kunalapha eSpain), ndixhalabile ukuba xa ndifuna ukuyivula apha iza kusebenza. Ndiyaqonda ukuba ukuba yi-quad-band akufuneki kubekho ngxaki. Nabani na onamava okanye owaziyo malunga nalo. Ndiyabulela kwangoko
Ewe, ewe yinto esulungekileyo nehlawulwa kwangaphambili, ngakumbi ubeka ikhadi elihlawulelwa kwangaphambili labo anakho ukuba athengise ngokukhululekileyo.
Into endiyifumeneyo yeyokuba ukubhatalwa kwangaphambili kweorenji akusekho njengakuqala ngokuhlaziya ii-euro ezingama-50 udibene ne-150 yeerandi, i-50 oyibekileyo kunye ne-6 yekhuphoni elilethwe likhadi le-seri kunye ne-80 nokunye , kodwa oku kugqityiwe.
URGonzalo, ukuba ukhululekile, andiqondi ukuba uza kuba neengxaki.
Enkosi ngokujonga kwakhona ... ndiyithathile le nto isiphelo sendlela kunye neorenji ngee- € 0, kodwa ndizifundile ezinye iiblogi ukuba ezinye iinkqubo ezinje nge-imeyile okanye i-Youtube azikho. Ngaba zinokufakwa kamva? Ayisiyokuba ubomi bam buye kum kuba andinayo i-YouTube okanye i-gMail, kodwa ngamanye amaxesha kunokuba kukuzonwabisa ukubukela ividiyo kuloliwe, akunjalo?
Ndifuna nokwazi ukuba isebenza kanjani iGPS. Ndiyazi ukuba kukho iinkqubo ze-Android eziqulethe imifanekiso yaseSpain okanye iYurophu iphela (njengeGPS eqhelekileyo nekhoyo ngoku) kwaye ungasebenzisi gMaps. Ndingayisebenzisa iGPS NGAPHANDLE konxibelelwano lwe-intanethi? Into eluncedo kakhulu ukuba ndiyishiya iSpain kwaye andifuni ukuqhagamshela i-3G kwimodi yokuzula. Ngaba inayo i-eriyali yayo ye-GPS okanye ifana ne-iPhone enqunyelwe kwi-triangular phakathi kwee-eriyali ezihambayo?
Ngaba kunokwenzeka ukuvuselela kwi-Android 2.0 xa iphuma? Usebenza njani uhlaziyo? Ngaba kunzima ukuvumelanisa i-Android neMacintosh?
Ndicinga ukuba kuyakwenzeka ukufaka i-youtube ngaphandle kweengxaki. gmail ndicinga ukuba iyakwenza njalo. ICopilot bukhoma sisicelo esifana neTomt ngaphandle kokuba unxibelelwano lwe-intanethi. Khangela kuyo kwiblogi ukuba kukho ukuhlaziywa kwesicelo. Ifowuni ine-eriyali, kwaye ukusika uqhagamshelo lwedatha ye-gprs kufuneka utshintshe i-apn. Faka i-Android 2.0 ikakhulu andazi, ndicinga njalo. Ngqamanisa ne-mac, andazi ukuba uthetha i-ajenda kunye nekhalenda.
Into yokuqala yokuncoma inkcazo ye-htc.
Ndinayo itattoo ngeorenji kwaye izakufika kwiveki ezayo, ekuqaleni ayihambelani nenqanaba ledatha, nangona ndizakuvula iflethi kuba ndiyibona ibalulekile kolu hlobo lwesixhobo kwaye kuba ndiyaqonda ukuba inxibelelana ngokuzenzekelayo ne hlaziywa. Ngale nto ndinombuzo, ngaba kunokwenzeka ukuba kungasebenzi isakhono sokudibanisa kwi-intanethi kwaye uqhagamshele kuphela kwi-wifi?
Ngokupheleleyo. Ngokuzenzekelayo xa ifumanisa inethiwekhi yeWiFi iyeka ukusebenzisa i-3G ngokuchaseneyo, xa ilahlekile iyenza isebenze i-3G… oko kukuthi, kuya kufuneka uyishiye isebenze, ukuba uyayivala izakusebenzisa i-WiFi kuphela, ngaphandle kokuba ungayicimi.
Ngendlela, ndinayo ne-Orenji kwaye ndiyifumana ifomdablr ... umba webhetri undithatha kancinci engqondweni yam kodwa ayongxaki enkulu nokuba ... into efanayo iyenzeka nge-iPhone, iHero ...
Molo! Okokuqala, enkosi ngokujonga kwakhona, indicacisile kakhulu.Ndikhe ndayibamba le terminal ngeorenji, ndinayo iintsuku ezi-2 kwaye inyani kukuba ndiyarhaqa.Ndibona kuphela ukukhubazeka kweBattery, Ukuba ifowuni uyayisebenzisa "ngamandla" (nto leyo iqhelekileyo xa ufana nomntwana oneselfowuni entsha) ihlala kancinci.Xelela abo bacinga ukuyibamba ngeorenji ukuba iza kwiZen encinci ibhokisi enesikhokelo esikhawulezayo somsebenzisi, akukho ncwadana (iyandinceda ngakumbi ukufunda iiblogi kunye neeforamu ezinje ngaleya ithe isikhokelo).
Okokugqibela, i-antocara, ngenxa yento oqhuba ngayo (okanye nabani na onokundinceda) ndingathanda ukwazi ukuba ungandinceda kwizinto ezi-2 Okokuqala kukuba akukho ndlela yokuqhagamshela kwifowuni ngeBluetooth, nokuba pc, okanye kwenye ifowuni ... akukho nto, ihlala iphuma ngokungathi i-terminal icinyiwe, naxa uyivulile kwaye ibonakala.
Okwesibini: Ndine-Wi-Fi router endlwini yam, kodwa nokuba ndizama kangakanani, andinakho ukudibanisa ne tattoo, okanye ukubeka isitshixo sokhuseleko okanye nantoni na.
I-ps: umbuzo wesithathu ufikile kum! Ndifundile ukuba esi siginali singasetyenziselwa ukubukela iividiyo ezipheleleyo ze-youtube. Uyazi njani? enkosi kwakhona
Ingxaki ngeeselfowuni zolu hlobo yibhetri, xa zizonke, kubandakanya ne-iphone, ukuba zisetyenziswa nge-wifi, i-GPS, ibluetooth kunye nayo yonke into enebhetri eyenziwe yasebenza iyaphefumla. Umzekelo, i-3G ndikhubazekile kwaye into ihlala ixesha elide ibhetri. Ndidibanisa i-wifi kuphela xa ndiza kuyisebenzisa ngokufanayo ne-GPS.
I-bluetooth engeniswa sisiphelo ayisebenzisi ukutshintshiselana ngefayile nezinye iiterminal, kwi-Android version 2.0 okanye kwi-2.1, iya kuba sele yenziwe yasebenza. Kukho izicelo ezikukhonza ngenxa yoko. Into yomzila, kufuneka iqhagamshele. Ngaba uya kuba unqamkile kwi-dhcp kwi-router kwaye iya kuba ne-IP eyabelwe kunxibelelwano ngalunye? Ukuba kunjalo, kuya kufuneka unike ip kwi-tatoo. Ukuba unayo i-dhcp yomzila, qhagamshela i-Wi-Fi kwi tattoo yakho, kwaye xa kubonakala ngathi ufumene inethiwekhi, cofa kwi-connect kuyo, kungenjalo ayiyi kudibanisa. Ukubona iividiyo zeYouTube, ujonge isicelo seYouTube osifakileyo kwifowuni yakho kwaye ukusuka apho uyababona
Ndiyathemba ukuba iyanceda
Enkosi uPereJP. Umntwana kwafika nam kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo. Kuyinyani ukuba iiorenji ziluhlaza kunye nesikhokelo kunye nebhokisi ekuzisela yona, kodwa ke, yonke into ikumhlaba omangalisayo we-intanethi.
Ibhetri ayihlali ixesha elide nakum, kodwa njengawe, ndinje ngomntwana onento yokudlala entsha, kwaye andinakuyeka ukujijisana nayo.
... Andazi nokuba ndisisithulu kancinci, kodwa awucingi ukuba isandi siphantsi xa bekubiza? Inokuba iyinto yam, kuba ndihlala ndinayo loo ngxaki ngeeselfowuni.
Kwaye enye into encinci Ngaba isandi sewotshi ye-alamu sinokusetyenziswa kuphela kukuseta kwangaphambili? Abamnandi kakhulu kwaye andifumani ndlela yokuyitshintsha.
U-Airam, kum isandi kubonakala ngathi sisebenza kakuhle, kwaye andinaso.
Ngokumalunga nokwenza iithowuni (zombini i-alamu, kunye ne-sms) qhagamshela iTattoo nge-usb njengediski yediski kwaye wenze oku kulandelayo kwingcambu ye-SD:
Kwiithowuni, ifolda ebizwa ngokuba ziiRingtones
* Kwiithowuni zezaziso-Ifolda yeZaziso
Iithowuni zealam-Ifowulda ekuthiwa ziiAlarm
Iifoto zealbham- Ifolda ebizwa ngokuba yiFoto
Nje ukuba uzenzile, iithoni ziphuma ngqo ukuzikhetha xa usenza uqwalaselo.
Antocara, enkosi kakhulu ngolwazi lwe-wifi Okwangoku andikayiphumezi, kodwa ndiza kuhlala ndimosha malunga: p
Molo, ndinetattoo kwiintsuku ezimbalwa, andiziboni iividiyo kwiYouTube, ndikhangela ulwazi endilufundileyo k orenji ulubekile kwaye awukwazi ukuzibona iividiyo tmpc gmail, ukuba umntu uyazi ukusombulula nceda uchaze kum, inyama yehagu leyo yeorenji abayisombululi. iigras.
Molo Eva. Ndinomvambo oneorenji kwaye andinangxaki ekuboneni iividiyo zikaYouTube, nangona ndizibona zikwiphepha elinye leYouTube kwisikhangeli. Andazi ukuba uthetha ukuba….
Impumlo kaGmail, andinangxaki.Uke wazama ukufaka useto-ungqamaniso kwaye wenze uqhagamshelo lwangasemva?
Molweni nonke, umsonto onomdla kakhulu. Ukuba akukho ngxaki kule veki izayo bandiphathela umvambo ovela kwi-NY, ndiza kuchaza. Umbuzo wam umalunga nokuba le fowuni iyakunyanzela ukuba uhlale uqhagamshelwe kwi-intanethi, masingakuvumeli ukuba uyikhuphe kwi-wifi, i-3g, (yile nto intombazana yase-Orenji ixelele umlingane).
Ufuna ukubeka ikhadi le-simyo kuyo kwaye oku okwangoku abanalo inqanaba ledatha ethe tyaba. Andifuni ukuba iselfowni yam indophise qho ngenyanga. Enkosi ngeempendulo.
Umgangatho wedatha awunyanzelekanga ekusebenzeni kwesiphelo, kodwa kucetyiswa kakhulu. Ukuthintela ukunxibelelana nedatha, lungisa nje ubumbeko lwe-APN okanye ufake usetyenziso oluvala imveliso ngolo nxibelelwano.
Shame, ndizibuza imibuzo efanayo nawe. Xa unayo i-htc uza kubona ukuba kufanelekile ukuba ube nenqanaba ledatha ethe tyaba kwizicelo ezinazo, ewe, okoko nje umntu enokukufikelela. Ngokwenyani, enye yezinto ezenza ukuba esi sixhobo sikhethe unxibelelwano.
Ndingathanda ukufumana iitattoo kwiVodafone, kuba ndigqibile ukuhlala kunye nevodafone, kodwa ndiyazi ngabantu abaye "benza ngathi" ukuya kwenye inkampani kwaye banikwe phantse nayiphi na ifowuni ... Ndingathanda ukwazi ukuba ukhona umntu owaziyo onokuyenza.
Uxolo, umyalezo wonke awuthunyelwanga ...
Yintoni enxulumene neGPS ehamba kakuhle? Ihlala ixesha elingakanani kuwe ibhetri? Ngaba usasazo lwe-FM okanye ulwamkelo lwe-FM kuphela? Yintoni onokuthi uyiqaqambise njengamanqaku awomeleleyo kunye naqinisekileyo, ngokusekwe kumava onawo ngesi sixhobo?
Ukubulisa kunye nombulelo !!
UThixo sema, yeyiphi imibuzo .... Ndiqinisekile awuveli kwisebe lolawulo lomgangatho kunye nokwoneliseka kwabaxhasi be-htc? Hahahaha ...
Ngokukrakra, i-gps m ihamba kakuhle, nangona bendikhe ndayisebenzisa amaxesha ambalwa kwaye ndihambahamba eMadrid, akukho nto ixhaphakileyo eyenzekayo. Andikhange ndisebenzise unomathotholo, ke andazi ukuba ndikuxelele njani Ibhetri ixhomekeke, kwiintsuku zokuqala Ukuba uhlala usokola, ihlala ngathi ziiyure ezingama-7/8, kodwa xa ububhanxa buhamba kwaye mna kwimeko yam, ndinayo ne-wifi, uqhagamshelo lwangasemva njl njl njl. Sukuyisebenzisa njengosuku olunesiqingatha (kuyinyani ukuba ndiyathetha ndisuka kwiingqiniba zam kwaye ndichitha usuku nemidlalo, kum, ndilungile: i-pijada ukuze ikwazi ukwenza ngokwezifiso ityala (yintoni leyo , a pijada, xo cool), intuthuzelo yokuba ne-facebook kunye ne-intanethi Jikelele ngesandla naphi na kunye nekhibhodi ye-qwerty, eyenye into «engenangqondo», ndiyayithanda, into embi, ibluetooth ayisebenzi, ibhetri ihlala mncinci kakhulu xa kuthelekiswa nezinye iifowuni endinazo kwaye akukho thixo udlala i-tetris kwiimeko kunye nescreen sokuthinta !!: p
UAntoni jose sitsho
molo ndithathe umvambo we-htc onamachaphaza eorenji, kodwa andikhange ndifumane nqanaba, kwaye akukho nencwadana ithile izayo, andazi ukuba ezinye izinto zithetha ntoni ngaleyo H incinci kwiscreen kunye neentolo ezithile khanyisa kwaye bacime, kakuhle ngamafutshane, into endifuna ukuyazi kukuba ukuba ihlala ixhumeke kwi-intanethi, kuba njengoko indinika ixesha nayo yonke into, ukubona ukuba ndizakufumana ibhilikhwe endingenakuyihlawula . Enkosi. Umbuliso
Phendula u-Antoni Jose
Molweni kulungile ..
Ngaba ukhe wambamba umntu ngevodafone?
Ndiyibambe kwiVodafone, kwaye basandula ukundithumelela umyalezo omncinci wokuba inkampani yekhuriya iwushiye ekhaya ngeeyure ezingama-24/48…. Weeee !!!! Olunjani lona uvuyo !!!! I-HTC yam yokuqala ... ndiyathemba ukuba izakubonakala ilunge ngakumbi kunee-nokias ezimbini zokugqibela (ewe, i-N3310, i-N7650e kunye ne-N6670 yayiyi-canelita en rama ... kakhulu kangangokuba ndisenazo kwaye ndizisebenzisa ngamanye amaxesha).
Ewe, ndiyaphambuka kwisihloko…. kwezi ntsuku zilandelayo sele ndinike izimvo apha ukuba ndiqhuba njani, umbono, njl. Ndizokonwabela njani ukuphuhlisa iinkqubo ezincinci phantsi kwe-android ...
Ikhamera yefoto yeTattoo ayinaso isibane, akunjalo? ... andiyifumani naphi na, kwaye oku kungxaki enkulu, kuba ngaphandle kwefleshi iifoto azixabisi nto ... kakhulu, iimeko ezithandekayo kakhulu zokukhanya ...
Ukusilela kwamafutha !!!!
Ndine-Htc Tattoo iiveki ezimbini ezine-orenji, ndicebisa ukuba ungayithengi le patato yefowuni. Into yokuqala kukuba iBluetooth ayisebenzi ukutshintshiselana ngeefayile nezinye iiterminal okanye iikhompyuter, kum yinto enkulu leyo. Ikhamera ayizisayo yinto yokudlala. Ukuba uyithengile njengam ukuthumela nokufumana iposi kwaye ujonge umxholo wayo, ulibale ukuba akunakwenzeka ukuvula i-pdf, igama, ukugqwesa iifayile, njl ... kwaye ngendlela yesikrini esiphikisayo yi kk, uluvo lwam kukuba ukuba uzimisele ukutshintsha iselfowuni, sukuyenza kule terminal kuba yinyani kk.
umntu uyazi ukusebenzisa ibluetooth ukuthumela nokuthumela iifayile ndincede xfavoooo
Phendula u-juan antonio
molo ndinayo i-htc tatoo (iorenji) kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo, kwaye sele ndinengxaki yam yokuqala ngayo. Abahlobo baka-Orenji bakuthumela oku sele kukhankanyiwe ngaphandle kwalo naluphi na uhlobo lwencwadana yemigaqo kwaye ngaphezulu koku abanako ukukunika nayiphi na idilesi yeenkonzo zobuchwephesha ke ukuba iyaqhekeka…. Yintoni ephezulu??? Kudala ndizama ukudlulisa imifanekiso ye-HTC P6300 yam endala kwaye akunakwenzeka ukuba andazi ukuba iyakuba yinkqubo ye-Android oq? Endala ndine windows ezihambayo kwaye ndenza kakuhle, kodwa le ndicinga ukuba izakusinika okuninzi ukuba sithethe ngayo.
Ukuba nabani na uyazi ukuba ndingayidibanisa njani ngeBluetooth nezinye iiterminal, ndingavuya kakhulu xa ungandixelela.
Yonwabela unyakhomtsha ku-2010
Molo, okokuqala, komnye umntu (andilikhumbuli igama, uxolo) obuze kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo x h ngeentolo ezincinci kwaye bendingenanqanaba ledatha okanye into enjalo, ndikuxelele ukuba ewe, fumana oko kukuba uqhagamshelene, ke nokuba ungena kwisantya okanye uye kulungelelwaniso kwaye ulunqamle, kuba isiqhulo sizakuphuma x incopho
Kwaye, xa iron19, ndikuxelele ukuba ndiyibambe nge-oranfe, kwaye akukho sikhokelo okanye nantoni na, kodwa ukuba iyakusebenzela ndilufumene lonke ulwazi endilifunayo kwiwebhusayithi htcmania.com (ubhaliso lusimahla kwaye bayasombulula phantse onke amathandabuzo)
Into malunga nebluetooth (bayakucacisela yona phaya) kukuba ayisebenzi kwesi sigxina ngenxa yenguqulo ye-Android enayo (i-1.6 endicinga ukuba ndiyayikhumbula) kwaye ayizukusebenza de ingu-2.0 ikhutshwe, ethi Ndiyayiqonda ukuba iphuma ekupheleni kwale nyanga okanye sele inguFebruwari. Ndiyathemba ukuba ipleyiti ikunikile into: p umbuliso!
Molweni zihlobo, ndinetattoo kwaye ndingathanda ukwazi ukuba ukhona kuni owaziyo ukuba intetho kaGoogle ingafakelwa na, ndizamile kwaye andikwazi. Ayizi kwintengiso nakumlingo, umzekelo, ukuba unako. Kukho izicelo ezingasebenziyo kumvambo ndicinga ukuba…. ibluetooth ayitsali kodwa kufanele ukuba ihambe, ndiyathemba ukuba iiapps ezingazukukwenza oko kungekudala. ukungabinaso isibane ukuba kuyasilela, ubude bebhetri yenye into kunye nokuba iza (ubuncinci kwiorenji) ngaphandle kwezikhokelo okanye enye into. ezinye zilungile ngokubanzi. Enkosi ngezimvo zakho, unceda kakhulu
molo ndinayo itatoo okoko amakhosi kwaye kufuneka ndonwabile yimisebenzi kodwa ndicaphukile ibhetri inkunkuma iyakhutshwa kungekudala kufuneka uthathe iselfowuni kunye netshaja umntu uyazi ukuba kukho iibhetri zomthamo ongaphezulu okanye indlela yokuphucula ukusebenza ndikule nto ndiyibuyisayo
Molweni nonke, ndinetattoo kutsha nje kwaye ukongeza kwingxaki yokuba nonke niphawule ngogqithiso lweefayile ngeBluetooth, kuyenzeka kum ukuba ukuba banditsalele umnxeba kuthatha ixesha elide ukukhala iselfowuni kude kube nge-2 okanye yesithathu lomntu oko ukubiza akufani nam. Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba yintoni? enkosi kakhulu. Kwelinye icala, umntu uyayazi indlela yokubeka ii-mp3s kwii-sms kuba andikwazi.
Ukudluliselwa kwefayile ngeBluetooth akunakwenzeka kwi-Android okwangoku, de kube inguqulelo engu-2.0 ayizukubakho.
Molo, kwiintsuku nje ezimbalwa ndiza kufumana i-HTC Tattoo enedatha enxulumene noko. Umbuzo wam ngulo, ndingabelana ngesinxibelelanisi seHTC ye-Intanethi ukuze ndikwazi ukusefa kwilaptop yam?
Ngokomgaqo kufuneka ubuze umsebenzisi, ngokuthe ngqo kunokwenzeka kodwa abaqhubi abaqhelekanga ukuyivumela
NDINGATHANDA UKWAZI UKUBA NDIYIVULELE NJANI I-HTC TATTO ENDIYITHENGA NGE-ORANGE KUNYE NOKUFIKA KWEENKOSI
Molo kwakhona, kwenzeka ntoni komnye umntu ngaphandle kwam malunga nokulibaziseka komnxeba? kuba sele iqala ukundicutha: S
Namhlanje ndithenge enye kwaye ayikafiki kwaye sele ndicinga ukubeka i-2.0 kuyo, ndixelele ukuba sele kunokwenzeka? Kwakhona, ukuba iyayixhasa.
Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba bobuphi obona bushushu buphethe ??? Andifuni ukuthatha ikhamera kwi-snowboard, kwaye ndifuna ukuthatha iselfowuni, okwenzekayo kukuba andazi ukuba izobamba ...
Nceda, ngokukhawuleza ngcono, ndiyahamba ngoFebruwari 2.
Kungenzeka ukuba ibambe, kodwa kwelinye icala ikhamera yakho ayinayo into oyifunayo kwaye yi-autofocus. Kwaye ikhamera ilunge ngakumbi kunayo nayiphi na iselfowuni.
Ngaba uyazi ukuba ungazibeka iifoto njengephepha lodonga ngaphandle kokwandiswa njengoko zibonakala.Uyazi kwakhona ukuba zinokusetyenziswa njengetoni xa zikubiza enye yeengoma ezigcinwe kwimemori khadi yakho. Enkosi.
yum yum sitsho
Ngaba awunakuvula ii-pdfs okanye amagama?
Ndiyaqonda ukuba oku kusonjululwe nge-Android 2.0
Phendula yum yum
M "ABALIMI sitsho
BASINIKE IKAT YOKUBHALA, HAMBA NGOKUGCWELE NGE-MOBILE ABASINIKEYO.
Phendula M "CARMEN
molo, yop kwakhona, umbuzo endinawo, andazi ukuba yintoni ingcambu yekhadi le-SD, ndiyazi ukuba yintoni ikhadi le-SD kunye neetoni andazi apho kufuneka ndivule iifolda ze-rintones, nceda , nceda !! Enkosi.
Ingcambu ingaphakathi ekhadini kodwa ngaphandle kokubakho nakuphi na ulawulo.
Mholweni. ITattoo inayo iGPS. I-GPS ayifakwanga, sisixhobo esiphethwe yitheminali, enye into yisoftware yokuhamba, njengeTomtom. Kukho usetyenziso olufana neCopilotLive okanye iMaphu zikaGoogle ezinokufakwa. I-Bluetooth yokuhambisa iifayile iya kuza kuhlobo olulandelayo lwe-android. Ngoku kukho usetyenziso olwenza ukuba lube yingcambu
Kwaye uthini nge-pdfs?
Kwi Android Market kukho izicelo zoku
Molweni nonke, ndiyikhuphele isoftware yekopi, kwaye akukho ndlela yokuyifaka, umfaki wesicelo akandivumeli ukuba ndiqhubeke, ndiyenza kwikhompyuter, kwaye andazi ukuba ichanekile na, kuba andazi ungayenza njani ngenye indlela, ndilahlekile kakhulu, kwaye ndiyaphambana, ukuba umntu angandinika isandla ndingayivuyela loo nto, enkosi kwaye ube nosuku oluhle
Omnye umbuzo, ngaba itatoo inayo inkqubo yokufaka ifayile yokufaka? Yinto endibuza yona njengoko ndiyifundile apho, ukufaka isoftware yegps. Uxolo ukubuza kakhulu, kodwa ndiyintlanzi kuyo yonke le nto, kwaye ndifuna ukufaka i-GPS, imibuliso kubo bonke kwaye ndiyabulela
Molo, ndinayo i-htc tatoo, endiyifumene izolo kwaye andazi ukuba ndingazithumela njani izinto (iifoto, iingoma, njl.) NgeBluetooth. Ungandixelela nceda.
Molo kwakhona. Andazi ukuba uyibeka kanjani ingoma njengeringithoni, ungandixelela nceda
Wave kwakhona wonke umntu, uxolo ngokuba nzima kodwa ndabona nje indlela ithoni yomnxeba esekwe ngayo, oko kukuthi, iingoma hayi iipolytones, ndibone ukuba uninzi lwenu belunengxaki. Makhe siye kwinqanaba, kuya kufuneka ucofe ingoma ofuna ukuyibeka njengethoni, xa sele idlala, cofa kwimenyu kwaye ngasezantsi ngasekunene ibhokisi iya kuvela eza kuyibeka njengethowuni. Ndiyathemba ukuba iyanceda
Molo Guillermo, ukubeka iingoma njengeringithoni, kuya kufuneka uvule ifolda kwikhadi le-SD elinegama leerintoni kwaye ubeke iingoma ozifunayo ngaphakathi, kwaye ziya kuphuma zinje, ndiyenze ngoluhlobo kwaye iyasebenzela mna, ndicinga ukuba ndifumene kule foram, ebekwe ngumsebenzisi, ukuba unayo nayiphi na imibuzo undixelele into, imibuliso
Ewe ndonwabile ngeselula. Khululeka kwaye usebenzise oko. Zininzi iinkqubo ezingafakwanga, kodwa yile nto yentengiso entle. Zininzi izicelo zasimahla, phakathi kwazo, kwabo banengxaki yeetoni, nangona sele kuchaziwe apha ngasentla ukuba ungayenza njani ngokwenza iifolda kwi-SD, unokukhuphela usetyenziso lwasimahla kwimarike ebizwa Iithowuni. KwiBluetooth kukho esinye isicelo: ukuhanjiswa kwefayile yeBluetooth, okuyinyani kukuba ayitshintshisi iifayile phakathi kwee-htcs, kodwa nezinye iiterminal.
Kwi-gps kukho enye ekungafuneki ukuba uhlawule ilayisensi kwiimephu ... kodwa andilikhumbuli igama ngoku, kuba andilisebenzisi.
Iinkqubo ezinomdla zokukhuphela kwaye uqala ukuxabisa esi sixhobo:
Umphathi Wefayile ye-ASTRO: Le nkqubo isetyenziselwa izinto ezininzi, ngokufutshane sisiKhangeli seFayile, apho unokukopa khona, ucime, uthumele iifayile ngeposi, ku-Picassa, ...
I-SIM Checker Lite, kwimeko yokuba iselfowuni yakho ibiwe kwaye elinye ikhadi lifakiwe. Uthumela i-imeyile kunye nesms apho ubonakalisa indawo ekuyo ngqo iselfowuni yakho, ukongeza kwinombolo yefowuni yomhlobo wabanye.
I-SMS ephathwayo, yee-sms, ibonakala ibhetele ngokungapheliyo kunaleyo iza neselfowuni, kunye nokuba nezinto ezininzi onokukhetha kuzo ukuze uyiqwalasele nangona ufuna njalo.
I-Facebook ye-Android, kulungile, ukuba idityaniswe kwi-fb. Ayifani nenguqulelo yedesktop, kodwa kulungile ukuba awukwazi ukulinda ukuze ufike ekhaya.
aTrackDog, le nkqubo ikwazisa ngalo lonke uhlaziyo lwezinto ozifakileyo kwiselfowuni yakho, nokuba zivela kwiNtengiso okanye hayi.
Imephu yesibhakabhaka sikaGoogle, ilungile ukunxibelelana nentombazana oyithandayo ngelixa ujonga iinkwenkwezi.
Shazam, ukwazi ukuba yeyiphi ingoma edlalayo. (Kukho esinye isicelo esibizwa ngokuba yimidomi, esikhangela iingoma nokuba sizingombombile, kodwa sihlawulwe)
Inqaku elincamathelayo, ukuyibeka emva kwiscreen esiphathwayo. Isebenza njengewijethi.
... yiza, ifowuni isisiseko, into elungileyo enayo yimakethi ukuze ikwazi ukwenza ngokusesikweni i-terminal eyi-100% kwaye ufumane okuninzi kuyo.
Bichearlo kwaye ungalahli ithemba.
Molweni bafana, ndiyathemba ukuba iyanceda:
enkosi lillibit ngencwadi yetatoo, inyani kukuba iyakulunga kakhulu kuthi, ingafani naleyo ingena iorenji, ebuhlungu ngenene, enkosi kwakhona nemibuliso.
ndilungile, ndilushiyile olu luvo ukuba kunokwenzeka umntu andazise malunga ne-android 2.0 entsha yetatoo enokuhlaziywa, kwaye ukuba ibiza into okanye ihamba njani, ndimtsha kuyo yonke le nto kwaye andazi ukuba isebenza njani le nto. Lonke ulwazi endiluthumele kulo luza kuba lolungileyo kwaye ndinombulelo, ndininqwenelela impela veki emnandi, imibuliso.
Molo, uthini, kuthatha ixesha elingakanani ukutshaja ibhetri?
kwaye kuthatha ixesha elingakanani ukulahla
Molo, namhlanje ndiyifumene iselfowuni kwaye ndiyintlanzi kakhulu.
Andifumani ndlela yokubona endinayo kwi-micro sd yam, ndiya kwimifanekiso kwaye kuphela eziziimobhayili eziphumayo, ndingabona njani?
Enye into encinci endiyihlebayo ... Ndikhuphela imidlalo kwaye ihlala kwiscreen esikhulu, ngaba ikhona indlela yokutshintsha kwaye ubeke kwifolda okanye enye into? Njengolawulo lomdlalo okanye into ...
Ndiyi-cntento kakhulu ine-muxas csas! ezinye nje iinkcukacha ze-CMO l bluetooth.Kodwa sn csas menres linda uguqulelo 2. xa luphuma
Molo, ndathenga i-htc tattoo kwaye andinalwazi lokuba ndingayithumela njani imifanekiso kunye neetoni ngeBluetooth, ukuba umntu angandixelela ukuba ndenze njani. Enkosi
Molo ndinengxaki efanayo, yintoni uVanesita endinayo kumvambo weentsuku ezimbalwa kwaye ndicinga ukuba intle kodwa umba weBluetooth, andazi ukuba ungayenza njani ukuba isebenze kuba ndiyenze yabonakala ... kodwa akukho nto ndinokuyenza ungathumeli okanye wamkele nantoni na ngefowuni okanye ikhompyuter yabo Ndakhe ndazama, ungandinceda, enkosi?
Ndiyaxolisa ukukuxelela ukuba ngalo mzuzu ngohlobo lwe-android efakwe umvambo, akunakwenzeka ukuba uthumele iifayile ngeBluetooth. Nge-Android 2.1 iyakwenzeka.
Molo, kufuneka ndifike emva kwexesha kunaye nabani na. Uya kubona ukuba andinakho ukungqamanisa nepc yam. Ndifakele i-sync eza ekhadini, ndaze ndalikhuphela usetyenziso kwiwebhusayithi ye-HTC, kodwa akukho nto.
Buza ukuba ukhona na umntu onokundinceda, kuba ndifuna ukungqamanisa i-ajenda yam, ikhalenda, njl.
molweni kubo bonke, okokuqala ukuvuyisana nendlela yonke into echazwe ngayo, kodwa ndinentandabuzo enkulu, ndingumntu othanda ulwenziwo kwaye ndadana kakhulu xa ndibona ukuba inkundla ye-lg ayinakubeka iifoto kwiscreen, ndiyazibuza ukuba umntu angazibeka, oko kukuthi, ukuba ndinokuba nephepha lodonga, masihambe, ndingayivuyela impendulo enkosi =)
Ungabeka umfanekiso owufunayo
Enkosi kakhulu !!! Inyani yile yokuba ndothuke kakhulu xa ndibona into eyenzekileyo ebaleni kwaye ayenzekanga ngendlela efanayo jhehehe, kodwa ndinamanye amathandabuzo, jonga ndifuna ukutshintsha iselfowuni kwaye inyani andazi ukuba oku kubonakala kum k kulungile kodwa kwelinye icala ndibona ukuba kukho iingxaki ekusezintweni, ke andazi nokuba ndiyibambe le okanye ligorha okanye ndingaboni ukuba ungacebisa umbulelo na! =)
Nceda undiphendule, thabatha ivodafone ukunyusa apho bathathe khona i-euro ezingama-50 kwiselfowuni oza kuyithenga ihlala kuphela kude kube nguFebruwari 28 kwaye ndingathanda ukwazi izimvo ngaphambi kokukhetha enye, enkosi kakhulu kubo bonke!
Molo Berta, andinakukunceda kakhulu kuba andilazi iqhawe, kodwa ndinendawo yokuyichukumisa kwaye ndiyithengile iitatto kwaye ndonwabile kakhulu ngayo, inezinto ezithile ezingasileliyo njenge-bluetto, kwaye enjalo, kodwa ke, ayongxaki inkulu nokuba, ndiyakuxelela, andinawo amava amaninzi kolu hlobo lwefowuni, kodwa ndonwabile njengeqokobhe lokufumana kwam umvambo, eyona nto ndiyifunayo ukuze ukwazi ukufumana inkqubo yasimahla ye-GPS yokubeka kuyo kwaye sele uyisombulule into endiyisebenzisela yona, imibuliso kunye nethamsanqa ngokufumana kwakho okutsha.
ilungile kubo bonke, ndine-tato kwiiveki ezimbini ezidlulileyo andinakwenza ibhetri ihlale ngaphezulu kweentsuku ezimbini, nokuba i-3g ayisebenzi okanye ayisebenzi. Ngaba kuyinto eqhelekileyo?
I-tatoo iza ne-bluetooth enikwe amandla, kunokwenzeka kuphela ukuba uqhagamshele kwipheripherali, kodwa ungathumeli okanye ufumane iifayile, de kube luhlaziyo lwe-htc kuhlobo lwe-2.xxx (ekulindeleke ukuba bayenze,)
Ngokubhekisele kwibhetri ebuzwa ngumntu wonke, ukuba uyisebenzisa ngokuzeleyo iya kuhlala iiyure ezingama-6. Kodwa kuhlala kukho isokethi onokuthi uqhagamshele kuyo, emotweni ebharini, heh, ukuba awukho ehlathini, yingxaki enokuxazululeka.
Sele ndinayo iTattoo kwaye ngokuqinisekileyo ibalasele, nangona kum ibubufazi, kodwa incinci kuyo. Ngokubhekisele kwiBluetooth, andiqondi ukuba abantu bangayithenga njani into xa beqala ukufumanisa ukuba yintoni kwaye yintoni engenayo, ukuba ne-intanethi namhlanje engenazizathu. Ndizifundile iiforamu zam ndade ndadinwa kodwa bendisayithenga ndisazi umba webluetooth kwaye ayindothusanga, enyanisweni khange ndiyenze nokuba ivavanye. Kokunye, yenye yezona fowuni zefowuni ndakhe ndazifumana.
Molo, inyani ingcono, iHero inememori engaphezulu ye-RAM, ikhamera ye-5mpx ene-autofocus kunye nokuba nescreen se-3,2 is iyahambelana nazo zonke izicelo ezentengiso kwaye ngaphezulu kwayo yimultitouch. Ngokubhekisele kuhlaziyo lwe-Android luya kuphuma kwangoko kwiHero kunye nenyanga encinci kamva kwiTatto ke kufuneka silinde. Ukukhangela iifayile onokuzisebenzisa kwi-ASTRO, ngumhloli wefayile kuba iitatto azikho mgangathweni. Kwaye ngebluetooth ndicinga ukuba ndifundile ukuba kukho isicelo kwimarike esenza ubuqhetseba bokukwazi ukuthumela nokufumana kude kufike uhlaziyo. Ndiyathemba ukuba ikuncedile. Ndiyabulisa kwaye ayisiyiyo yokuba ndikhusela iQhawe, ndineTattoo kodwa ngaphambi kokuba babuze malunga neyantlukwano
Molo uGuille_zgz, enkosi ngempendulo yakho, inyani kukuba bendinethuba lokuvavanya ifowuni kancinci kwaye ndonelisekile yiyo, ke ndenza iodolo yam kwivodafone kwaye ndikulindele ukufika kwakho.
Molweni nonke, ndinefowuni iintsuku ezimbalwa kwaye ndenza iakhawunti ye-gmail kwiselfowuni. Okwangoku andinalwazi lokuba ndingaphuma njani kuyo kuba ibidityanisiwe imini yonke. Ngaba ukhona umntu onokundinceda? Ndiyabulela kakhulu
Uqinisekile ukuba itattoo iya kuba ne-Android 2.1
Kuya kufuneka ndinike ok ukuze ndiyigcine, ukuba uyandiphendula ndiyayixabisa.
Umfazi wam undinike i-HTC tatoo.
Ndineengxaki ezimbalwa.I-1, ayizukundivumela ukuba ndikhuphele usetyenziso lwe-caixa movil, sele ndiyiphawule kwiwebhusayithi ye-caixa, eyinkqubo ye-android, kodwa bandithumelela umyalezo onekhonkco kwaye xa ndicofa indixelela ukuba esi sicelo asazi ukuba sifumaneka kwimarike. Umfazi wam unomlingo kwaye ukuba unako.
Okwesibini ndifuna ukukhuphela i-imeyile yenkampani, ndiyilungiselela ngokunyaniseka okusebenzayo, ndibeka yonke idatha eyicelayo ,: igama eligqithisiweyo lomsebenzisi ... njl njl. ngokufanayo nge-iphone okanye windows mobile kwaye iyabasebenzela.
kwaye uthi hayi. Ngaba ufuna ezinye izicelo?
Phendula ku santi
Molo! Ndinengxaki ngetattoo yam .... ndiyithathile ngevodafone, kwaye xa ndizama ukuqwalasela iposi (ndineakhawunti ye-hotmail.es) indixelela ukuba akunakwenzeka ukuba uqhagamshelane neseva kwaye izakwenza njalo. Ungandivumeli ndiqhubeke…. (ngendlela elula nangobuKrestu nceda) Uyenza njani le nto? Okanye kufuneka ndenze iakhawunti ye-hotmail.com, bandixelele ukuba abaniki ngxaki? Enkosi!
Okokuqala kufuneka ube akhawunti hotmail
Uxolo, bendingafundanga kakuhle. Ndiyilungiselele kuphela ngokufaka i-imeyile yesicelo kunye nokufaka igama lomsebenzisi kunye nephasiwedi, kwaye emva koko ixhuma ngokuthe ngqo ngaphandle kweengxaki
Ndiyayithanda ngcono kune-HTC DIAMOND.
Inkqubo yayo yokusebenza ilula kakhulu ukuyisebenzisa kwaye inamandla kakhulu.
Ayipheli njengeDayimani eneWindows Mobile.
Njengomphuhlisi wesoftware ndikhetha i-WMobile, kodwa kungenjalo ngummangaliso womatshini.
Imibuliso kubo bonke, nam ndimtsha kwiitattoos, kodwa sele ndifunde kakhulu kwaye ndicinga ukuba ndiphumelele kwizinto ezininzi, ngendlela engakhange ndiyikhulule kwaye andinayo i-sim khadi, kwaye ndiyayisebenzisa ukufaka intanethi kunye ne-wifi, ukuqala kufuneka ufake i-htc ikhompyuter kwaye kwi-sync ungafaka nayiphi na inkqubo, unokukhuphela i-astro engumhloli kuba iitatto azizisi. Nayiphi na inkqubo ifakwe kwi-apk esebenzayo. okanye ifaka xa ikhutshelwa. I-gps sele iza neselfowuni, into ekufuneka uyenzile kukukhuphela isikhangeli, ndibeke iSygic (ekhutshelwe kwi-htcmania kwaye bachaza indlela yokwenza) apho kuninzi malunga neTatto, enokuqwalaselwa kwiwaka iindlela, xa ukufumanisa kuhlekisa kakhulu.
Molo, ndithathe i-HTC TATTOO kwiintsuku ezi-2 ezidlulileyo kwaye andikazifumani izinto ezininzi ezinokuziswa siselfowuni eqhelekileyo. Ngaba umntu unokundinceda? Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba ikhona indlela yokwenza iiMODES ezinje ngeNokia (ukuthula, okuqhelekileyo, okuphezulu njl njl) Enkosi.-
Kulungile, ndifuna ukudibana ne-Turner, nceda ukuba uyayifunda le nxibelelana nam, ndifuna ukuba ucacise umba we-gps, ukuba awunangxaki ndithumele i-imeyile kwaye ndiza kukuxelela, enkosi . vs_soldier@hotmail.com
Molo, ndinayo i-htc tatoo kwaye bendifuna ukwazi ukuba ungayenza idityaniswe kwi-intanethi kuphela nge-Wi-Fi kuba andinayo inqanaba ledatha kwaye inyuka imali, enkosi
Ndifuna ukusebenzisa i-htc tattoo njengemodem, kodwa bandixelele ukuba kufuneka ndikhuphele abaqhubi. Sele ndinayo iActivesync kodwa andazi ukuba ukhuphele phi okanye phi ukukhuphela abaqhubi, andibafumani kwiphepha le-htc. Umntu othile angandinceda, ulwazi lwam kunye nengxoxo yekhompyuter ayibanzi kakhulu. Enkosi
Molo, andinakubeka ingoma yethoni ndiyenze kube kanye kodwa khange ndibuyele ukufumana umntu onokuthi andenze njani enkosi
Molo u-Amel, kuya kufuneka wenze ifolda enegama (leethoni) kwaye ubeke iingoma ozifunayo, wakubeka kule folda, uza kutshintsha iithowuni kwaye kufuneka ushiye ukuyitshintsha, ndiyathemba ukuba uyenzile kulungile kwaye uyenze, fumana imibuliso.
Molo, ndingathanda ukunxibelelana nomntu ofake inkqubo yasimahla yeGPS kwi tattoo, andazi ukuba ungayifumana phi, ndiyikhuphele enye kodwa bendingazi ukuba ndiyifaka njani, ndicela uncedo kuye nabani na onokundinceda, nceda, nceda, nceda, nceda, dddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ...
Molo, ndiqhagamshela kwi-intanethi kuphela kwaye andinasiseko sedatha, ndifundile apha ukuba nge-APN sele ikho kodwa ndiyayifumana le
ivodafone yile (oku kungagqibekanga)
Inkonzo yevodafone es
Inethiwekhi yeselfowuni akufuneki yenziwe okanye ayisebenzi?
Ndifuna nje ukufikelela kwi-intanethi nge-wifi ayikho enye into
hello ana, ingasuswa kuseto, iisetingi ezingenazingcingo, inethiwekhi yeselfowuni. kodwa ndicebisa ukuba ungayisusi kuba kungenjalo awuzukufumana lukhulu kuyo
Molo, kulungile, i-tattoo yam igqibelele, kodwa ndinengxaki yenyanga ngoqwalaselo lwe-hotmail, ndifumana ii-imeyile, kodwa ayindivumeli ndizithumele, indixelela ukuba iserver ayisebenzi okanye ayifumaneki, ukhona umntu okhe wenzeka. Ukwanga
Imibuliso, ngaphezulu kwenyanga ephelileyo ndiyifumene "itattoo" yam kwaye intle, inye kuphela into, ibluetooth iluncedo kuphela ngaphandle kwezandla, ihlazo, kwiforum umntu aphawule ukuba mhlawumbi kuhlaziyo olulandelayo, inokusombulula , kodwa ... .. kwizinga le «hero» (ukuba ayikabikho), kuya kuthatha iminyaka
Molo kwakhona, kunye nabanye abasebenzi, ukuba umntu angandixelela ukuba ndiyifaka njani i-GPS yasimahla, inokuba yinto, i-imeyile yam yile
Andazi ukuba ndizikhuphele njani iifoto ukusuka kwi-HTC Tatoo ukuya kwikhompyuter.
kwikhabhinethi, kufuneka uyixhume kwikhompyuter ngentambo ye-usb, xa kuvulwa ifestile, uya kufumana iifolda ezininzi, kwenye yazo ziifoto, kulula, salu2 ..
Amagama amaninzi aqhelekileyo kunye aqhelekanga ngegama Rosselne sitsho
Esi sithuba sihle kakhulu, kwaye amagqabantshintshi asincedisa kakhulu. Ngapha koko, bandincedile ndayixabisa ngakumbi itattoo yam !!!! Ndingathanda ukukubuza umbuzo, ndisandula ukufumana le tattoo nge-ebay (ndihlala ePeru), ke iselfowuni ize kum ngesiNgesi (ungayicinga indlela endikhathaza ngayo ukubhala amabinzana anje "ndiyafa zokulala "kwifowuni yam)…. Ndizifundile ezinye iiforamu kwaye ndafumanisa ukuba ayithembekanga ukutshintsha ulwimi, ngaba yinyani le? Kwaye ukuba akunjalo, sisiphi isicelo osicebisayo ukuba uphume emarikeni? Enkosi!
Ndineengxaki zokugubungela umvambo wam. Ndacinga ukuba ngumbuzo womboneleli wam (ivodafone), kodwa ndiqinisekisa ngehoror ukuba nabani na onevodafone uhlala enogcobo kunam kwaye bendikhe ndiphume ikumbindi weMadrid ngamanye amaxesha. Ovela evenkileni undixelele ukuba ndiye kwiphepha le-htc kwaye ndihlaziye isoftware, kodwa andikwazi. Ngaba ukhona umntu obenayo le ngxaki wayisombulula? ukuba akunjalo ndiza kuyitshintsha. Enkosi
Ndifumene ingxaki kwilaptop nakwiTattoo.
Andisakwazi ukukhuphela iifoto.
Yeyiphi into entsha yokukhuphela iifoto uTattoo anayo?
Phendula kwiFashoni EMIBINI
Ndingathanda ukwazi ukuba i-htc tatoo efumaneka kwiorenji (eSpain) inokukhutshwa e-Ecuador kuba ndifuna ukuyithumela njengesipho, okanye ukuze ndazi ukuba yintoni le iphazamisayo, enkosi
Intetho yesibongo, imvelaphi, ukuhambelana kwefayili AICHA sitsho
Molo, KWIINTSUKU EZIMBINI EDLULA NDITHENGILE I-HTC TATO, KULUNGILE ESITOLENI BANDIXELELE UKUBA NDINGAKHUPHELA ISICELO SEBHUKU NGOBA YINTO ENDIYIDINGAYO, NDINGXAMILE UKWAZI UKUBA UMNTU UYE WAKWAZI UKUKHUTHALELA UKUBA NDINEMIHLA EMBINI. NGENDLELA ENDIHAMBA NGAYO ENDIXELELAYO UKUBA ayinakuba yiAlkGUIEN INESIQINISEKISO APHO NDINOKUKHUTHAZA SISICELO OKANYE INDLELA YOKUSENZA NDAKHANGELA ENKOSI
UOscar Freixes sitsho
Ndizamile ukukhuphela IINKCUKACHA ZOKUYA, ndikhuphele uguqulelo lwasimahla lwe3.0 kwaye ndizamile ukuthenga ingxelo epheleleyo, ukubonelela ngentlawulo kunye nolwazi lokuhlawula. Ukuza kuthi ga ngoku andikalufumani naluphi na utshintsho kuhlobo olufakelweyo. Ndinenguqulo efakiweyo ebhalisiweyo.
Kuye kwafuneka ndenze iakhawunti ye-gmail. Ndimele ndenzeni ngoku?
Phendula uOscar Freixes
Ndingathanda ukwazi ukuba inkqubo yokusebenza ivumela ukusebenza ngezicelo zeofisi ezinje ngeLizwi, ipowerpoint, ukugqwesa njl njl ,, nceda uqinisekise
Umthunywa wevangeli100 sitsho
Molo, ndingu-DAVID kwaye ndinetattoo, inkxalabo yam kukwazi ukuba yeyiphi isixhobo seBluetooth ekufuneka ndiyifakile ukuze ndikwazi ukufumana iifayile ezivela kwezinye izixhobo ezingezizo i-android, ngokumalunga nolunye usetyenziso olugqibeleleyo kukuphela kwesiphene ibluetooth ukuba kukho umntu owaziyo nceda undithumelele ulwazi kule imeyile (elmisionero100@hotmail.com) enkosi ngeenkcukacha